साहित्य Archives - eNayapusta
जीवनको पहिलो कमाई २२७ रुपे
(गत हप्ताको जारी...) यहाँ अंग्रेजीको प्रसंग ‘स्किप’ गर्देको छु। पछि कुरा गरुम्ला। पहिले पत्रकारितातिरै फर्किएँ। धरानमा स्थानीयस्तरमै व्यावसायिक पत्रकारिताको प्रयास थालिएथ्यो। यसकै लागि ‘धरान टाइम्स’ प्रकाशन सुरु भएथ्यो। ‘धरान टाइम्स’ले थोरै तर स्ट्रिन्जर(अस्थायी समाचारदाता)लाई नि पैसा दिन्थ्यो। त्यो दैनिक ...
पत्रकारितामा मेरो पुनरागमन कतिपयले अचम्म मान्छन्। तर, जब फेरि समाचार लेख्न थालेँ, त्यहीँबेलादेखि पत्रकारितामा मेरो पुनरागमन सुरु भो। खासमा साठीको दसकको उत्तराद्र्धतिर। यसबेला समाचार त लेखिनँ तर काठमाडौंका मूलधारका ठूला पत्रिकाहरुमा मेरो लेख छापिन्थ्यो। समाचार त ६९ सालतिर लेख्न सुचारु गरेँ। यसैले नयाँ संगतका लागि अच...
मिर्मिरेमा गरिबहरु पेट पाल्नको लागि कुदेको देख्छु! बिहानीमा धनीहरु पेट फाल्नको लागि कुदेको देख्छु!! कस्तो अचम्म हो यो पेट सबैको समस्या पेटमै देख्छु! हिजो आज यो शहरमा मान्छेहरु कुदेको मात्र देख्छु!! भ्रष्टाचारीहरु यो देश लुट्नको लागि कुदेको देख्छु! अस्त्रधारीहरु बुद्धि भुट्नको लागि कुदेको देख्छु!! वस्त्रधारीहरु ...
श्रीमतिलाई जन्मदिनमा नेकपा नेता काङमाङको भावुक पत्र
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य अजम्बर काङमाङ राईले आफ्ना श्रीमती कुमारी राईको जन्मोत्सवको अवसरमा विहीबार (२७ चैत) भावुक पत्र लेखेका छन्। उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा पत्र सार्वजनिक गर्दै वैवाहिक जीवनका आरोह/अवरोहबारे लामै विस्तार लगाएका छन्। नेकपा खेलकुद विभाग ईन्चार्जसमेत रहेका काङमाङले ‘कुमारी तिमी ...
आज ‘अप्रिल फुल’ अर्थात् मूर्ख बनाउने दिन। हरेक वर्षको १ अप्रिललाई मूर्ख बनाउने दिनको रुपमा विश्वभर मनाइन्छ। यस्तोमा सञ्चारसंस्थाले पनि समाचारको माध्यमद्वारा पाठकसँग ‘अप्रिलफुल’ मनाउने ट्रेन्ड नौलो होइन। यसै सन्दर्भमा ईनयाँपुस्ताले पनि आफ्ना पाठकसँग ‘अप्रिलफुल’ मनाउने निर्णय गर्यो। र, चर्चित साहित्यकार राजन मुकार...
यसअघि ‘अप्रिल फुल’ अर्थात् १ अप्रिलका दिन प्रकाशित सामग्रीबारे साहित्यकार राजन मुकारुङको व्यक्तिगत जीवनमा पर्न गएको असहजताका कारण आत्मालोचना गर्दै हटाइएको छ। र, सम्बन्धित पक्षसँग क्षमाप्रार्थी छौं। -ईनयाँपुस्ता...
३४ सय मिटर माथि भेंडीखर्कमा सिलवालको ‘श्रीलंका स्मृति’ विमोचित
नुवाकोटः पत्रकार अशोक सिलवालको पुस्तक श्रीलंका स्मृति ३४ सय मिटर उचाईमा रहेको फिकुरी डाँडामा विमोचन गरिएको छ। लाङटाङ सद्भावना दूतसमेत रहेका पत्रकार सिलवालको पुस्तक ‘श्रीलंका स्मृति’ उनकै गाउँ फिकुरीमा विमोचन गरिएको हो। फिकुरी ट्रेल एक्सप्लोरेशन ट्रिपमा सहभागी पदयात्री समूहले किस्पाङ गाउँपालिकाको फिकुरी डाँडास्थि...